भारतको बेङ्गलोरबाट2बर्षको नाबालकलाई छोडेर, सुनका गहना लगेर श्रीमती फ’रार …. – Cn Chautari
भारतको बेङ्गलोरबाट2बर्षको नाबालकलाई छोडेर, सुनका गहना लगेर श्रीमती फ’रार ….
माघ ५, २०७८ बुधबार 153
भनिन्छ महिला घरको लक्ष्मी हुन् ।
तर त्यही लक्ष्मीले यस्तो कार्य गरेपछि के हुन्छ ? त्यस्तै भएको यहाँ भारतमा बझाङ घर भएकी एक महिला गहनासहित फरार भएकी छन्। भारतको बेङ्गलोरबाट बस्दै आएकी २३ वर्षीया गिता थापा (खड्का) फरार भएकी हुन्।
गिताको माइत र घर बझाङमै रहेको खुलेको छ। गिता बेङ्गलोरको हुस्सु रोडबाट गत असोज २१ गते २ वर्षीय नाबालक छोडेर फरार भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनका श्रीमान धित खड्काले गिता गहनासहित फरार भएपछि भारतीय प्रशासन मा निवेदन दिएका छन्।
गहना सहित 23 बर्षिया महिला फरार सुदुरपश्चिम प्रदेश बझाङ जिल्ला खप्तड छान्ना गाउँ पालिका वडा नं ६ पाटादेवल पुजारी गाँउ निवासी बसन्त ब. थापा र पुल्तिसरा थापा कि छोरी र धित खड्का कि धर्मपत्नि गिता_थापा (खड्का) बेङ्गलोर हुस्सु रोड बाट 07/10/2021 गतेका ।
दिन2बर्ष को नाबालक छोडेर फराहर भएकि छिन । उनका श्रीमान धिर बहादुर खड्का डिउटी गएको बेला बैतडि घर बताउने नाम नखुलेको एक दलाल ले आफ्नो श्रीमती भगाएको बताउछन ।खड्का आफु घर नभएको बेला बेङ्गलोर मा कर्म थलो बनाइ बसेका बैतडिका एक 24 बर्षिया युबक घरमा आउने ।
जाने शंका भएपछि उनले आफ्नो श्रीमती लाइ सम्झाएको बताउ छन । आफु घर नभएको बेला श्रीमती गर गहना लिएर फरार भए को र हातमा भएको फोन रुममै स्विचफ गरेर छोडेको बताउछन । खड्काको स_परिवार करिब5बर्ष देखि भारतको बेङ्गलोर हुस्सु रोड मा कर्म थलो बनाइ बस्दै आउनु भएको थियो ,
Prevबिदेशमा बस्ने नेपालीले हुण्डीको प्रयोग गरिदिदा अप्ठ्यारोमा नेपाल सरकार
Nextएमालेका नेताले एक रुपिँया भ्रष्टाचार गर्दैनन् : ओली
धेरै गल्ति गरे अब सुध्रिन्छुः कमल थापा
NO MCC देश बचाउनु छ भने पिलिज सक्दो सेयर गरौ